विश्वभर डाउन भएको फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्एप ६ घण्टापछि चल्यो, के थियो बन्द हुने कारण ? - सिधा दृष्टी
विश्वभर डाउन भएको फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्एप ६ घण्टापछि चल्यो, के थियो बन्द हुने कारण ?
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा नै ‘डाउन’ भएको फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको समस्या करिव ६ घण्टापछि सुल्झिएको छ ।
फेसबुक लगायतका यी तीन वटै सामाजिक सञ्जालमा समस्या आउँदा विश्वका अर्बौँ प्रयोगकर्ताले सेवा प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भएका थिए । ६ घण्टा पछि यी सामाजिक सञ्जालमा देखिएको समस्या समाधान भएको फेसबुकले जनाएको छ।यी तीनवटै सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक कम्पनीका हुन् जसलाई वेबसाइट र स्मार्टफोन एपहरूमा चलाउन सकिएको थिएन। फेसबुकले त्यसलाई नेटवर्किङसम्बन्धी समस्या बताउँदै त्यसका लागि माफी समेत मागेको छ।उसले ती समस्या सुल्झाउन र आफ्ना
डिजिटल मञ्चहरूलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आफ्ना टोलीहरूले सक्दो छिटो काम गरेको जनाएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा अवरोध झेलेको ६ घण्टापछि फेसबुक र उक्त कम्पनीका अन्य सोसल मिडिया मञ्चहरू ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामका अर्बौँ प्रयोगकर्ताले पुनस् सेवा प्रयोग गर्न पाएका छन्।
देशभरको मौसममा बदली, यस्तो छ आगामी तीन दिनको मौसमी पूर्वानुमान
जारी आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्ससंग चन्नई सुपर किङ्स ३ विकेटले पराजित